संरा सङ्घको महासभामा यो साता संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएका अभिव्यक्तिले संसारमा फेरि पनि युद्धको बादल मडारिएको छ। प्रजग कोरिया, इरान, भेनेजुयलालगायतका देशहरूविरुद्ध संसारको महाशक्ति मानिएको देशका राष्ट्रपतिको गैरकुटनीतिक र अशिष्ट धम्कीले युद्धको सम्भावना बढेको हो। कुनै पनि देशले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि खतरा भएको बखत आत्मरक्षाको लागि प्रतिरोधी हतियार बनाउनु स्वाभाविक हो। संरा अमेरिकाको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि शक्तिबाट खतरा भएको अवस्थामा आत्मरक्षाको लागि उसले तयारी गर्नु जति सामान्य हो, संसारका अरु कुनै पनि देशले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको लागि प्रतिरोधमा उभिनु त्यत्ति नै अपरिहार्य प्रक्रिया हो।
प्रजग कोरिया र इरानमाथि संरा अमेरिका नेतृत्वको साम्राज्यवादी शक्तिले कुनै पनि बेला गर्नसक्ने आक्रमणको प्रतिकारमा ती देशहरूले प्रतिरोधमा हतियार बनाउनु स्वाभाविक हो। कदाचित साम्राज्यवादी देशहरूबाट युद्धको धम्की नआउने र आक्रमणको कुनै सम्भावना नभएको अवस्थामा ती देशहरूले हतियार बनाउने थिएनन्। तर टाउकोमाथि 'डेमोकल्सको तरबार' झुण्डिएका देशहरूले आफ्नो शीर रक्षाको लागि केही न केही उपाय गर्नु अपरिहार्य र सामान्य प्रक्रिया हो। त्यसलाई 'युद्धउन्माद' देख्नु साम्राज्यवादी देशको कुत्सित मनसायको समर्थन गर्नु हो।
संसारको कुनै पनि देशको राष्ट्रप्रमुखले कुनै अर्को सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई होच्याएर बोल्नु र त्यो देशलाई 'पूर्णतः सखाप बनाइदिने' धम्की दिनुले अन्ततः संसारलाई के र कस्तो परिणाममा पुर्‍याउला? आफ्नो पक्षधरले आणविक हतियार बनाए सदर हुने अनि आफ्नो विपक्षले त्यही हतियार बनाए कोकोहोलो गर्नु के विश्व शान्तिप्रतिको साँचो इमान्दारी हो? प्रजग कोरिया र इरानको आणविक कार्यक्रमलाई दोहोलो काद्ने संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिले इजरायलको आणविक परीक्षणलाई किन स्वागत गर्ने गर्दछ?
ट्रम्पको अभिव्यक्ति संसारभरका जनताको लागि मात्र होइन, उनकै सरकारका पदाधिकारीको लागि समेत भारी हुन थालेको छ। त्यस कारण ट्रम्प प्रशासनका केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा समेत दिइसकेका छन्। संरा अमेरिकी जनता समेत आफ्नो राष्ट्रपतिको बहुलठीपूर्ण व्यवहारको कारण हैरान छन्। संरा अमेरिकी संस्थापन पक्षधर मिडियासमेत ट्रम्पको जथाभावी अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन्। यसर्थ प्रजग कोरियाली नेता किम जोङ उनले ट्रम्पलाई 'मानसिक रोगी' र इरानका राष्ट्रपति रोहानीको 'विश्व राजनीतिका बद्मास नवप्रवेशी' को संज्ञा गलत र अबाञ्छनीय होइन। ट्रम्पका यस्ता अभिव्यक्तिले अन्ततः आणविक हतियार बनाउन प्रजग कोरिया र इरानले दिने गरेका कारणलाई सही प्रमाणित गरेको छ।
तसर्थ ट्रम्पका अत्यन्त मिचाहा र बद्नियतपूर्ण अभिव्यक्तिले आखिरमा विश्व शान्तिमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै संसारलाई युद्धतिर धकेल्नेछ। कदाचित संसारमा युद्ध भएको अवस्थामा यसको दोषी ट्रम्प र उनको बहुलठीपूर्ण अभिव्यक्ति हुनेछ।